UVladimir Volfovich Zhirinovsky - umuntu ongenangqondo kakhulu enkundleni yezombusazwe. Isitayela sakhe esingenakuqondakalayo siyabonakala, kanti ukusebenza ngalunye kungahle kuhlukaniswe ngamaphuzu. Iphini ngokwakhe akalokothi abe namahloni ekukhulumeni nasesimweni sakhe sengqondo ngokuqondile. Mhlawumbe lokhu kwakuyisizathu sokuthandwa kwakhe. Ungomunye wabopolitiki abambalwa ababelana ngemininingwane yokuphila komuntu siqu nomndeni. Ayifihli umholi unomphela weqembu le-LDPR nomsuka wangempela.
Igama langempela likaVi Zhirinovsky
Ubaba kaVladimir Zhirinovsky wayebizwa ngokuthi uWolf Isaakovich Eidelstein. Yileli gama ukuthi isombangazwe sigqoke kwaze kwafika ngo-1964, nakuba yena wakhuliswa ngubaba wakhe wesifazane konke ukuphila kwakhe. Umndeni ka-Eidelstein wawuhlala ensimini yosuku lwangaleso sikhathi eNtshonalanga Ukraine futhi kubhekwa njengokuchuma. Kodwa ngemva kokuba u-Wolff Isaakovich nomfowabo bakhulume, u-Aaron wathunyelwa eKazakhstan. Khona-ke uyise kaVladimir wathunyelwa ePoland, futhi ekugcineni wathuthela kwa-Israyeli, engakaze abone indodana yakhe. Wolf Isaakovich washona ngo-1983 eneminyaka engu-76. Ngonyaka ka-2006 uZhirinovsky wakwazi ukuthola ithuna lokhokho, lapho eya khona edolobheni laseTel Aviv. Ngenkomfa yabezindaba, wavuma ukuthi kwambangela umsebenzi omkhulu.
Ngokuphathelene nezimfihlo zomndeni wakhe, uVladimir Volfovich utshele uVladimir Pozner ngesikhathi sokuxoxisana. Ngokwezombusazwe uqobo, wayengu-Eidelstein kusukela ekuzalweni, futhi unina u-Alexandra Pavlovna Zhirinovskaya washiya igama lakhe emshadweni wokuqala. Umsunguli weqembu le-LDPR uthe esikoleni sakhe isizinda sakhe samaJuda sabangela imibuzo futhi sidonsela ukunakwa okungadingekile. Yingakho ngemuva kweminyaka yobudala uVladimir wanquma ukushintsha igama lakhe kuZhirinovsky, kodwa washiya igama lakhe. Kuyathakazelisa ukuthi indodana kaVladimir Volfovich, futhi, ngesikhathi esifanayo iphindaphinda isenzo sikayise. Ngeshumi nesithupha, u-Igor wathola ipasipoti futhi washintsha igama likaZhirinovsky waya kuLebedev, okuyinto umama wakhe uGalina Aleksandrovna enxibe ngayo. Ngokolunye ulwazi, le nsizwa inqume ukuthatha lesi sinyathelo ukuze imisebenzi yezopolitiki kayise ingathinti impilo yakhe yokuphila nokuphila kwayo.
UTatyana Navka noDmitry Peskov bazoshada eSochi
UJulia Akhmedova noRuslan White: Iqiniso lonke mayelana nabahleli bomshado abaFake Up
Ukuphila komuntu siqu kaRegina Todorenko namuhla: izindaba zakamuva
Ukudlala ngothando phakathi kwendoda nowesifazane
Kuyisikhathi sokuba nengane?
I-origami yamama-pearl edayisha kusuka ku-Dior
I-Horoscope yomdlavuza ngonyaka ozayo
Indlela yokuhlela kahle ikhabethe yakho?
Ukutshalwa kwamazinyo: izindleko nokubuyekezwa
Ukucasuka kwangaphakathi kwangaphakathi
Indlela yokuqhubeka, ukuze umfana angalahlekelwa inzalo
Amathoyizi ezemfundo zanamuhla ezinganeni zonyaka wokuqala wokuphila
Iklabishi ihamba ngemifino yezilwandle
Ukushisa kwezulu nesimo sezulu eSochi ngoFebruwari 2018: Isibikezelo esiqondile se-Hydrometeorological Center